व्यक्तित्व र व्यक्तित्व
मनोविज्ञान र सम्बन्ध स्व-विकास
आधुनिक संसारमा धेरै मानिसहरू व्यक्तित्व र व्यक्तित्वको अवधारणाहरु बीचको भिन्नता बुझ्न सक्दैन, प्रायः यी दुई परिभाषाहरू पहिचान गर्दै।
वास्तवमा, व्यक्तिगतता व्यक्तिगतको सम्पत्ति हो, यसको अनूठा र अनोखी रुपमा यो सार्वजनिक जनसाधारणबाट अलग हुन्छ। थप स्पष्ट रूपमा, यो निम्न रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ: एक व्यक्ति समाजमा, एक सामाजिक सम्बन्धको मूल्यांकन र समाजको एक विशेष ढाँचा अनुपालन को डिग्री मा एक दृष्टिकोण हो; व्यक्तित्व एक व्यक्तिको विचारधारा दृष्टिकोण हो, स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिएको व्यक्तित्व र विशेषताहरु को एक अधिग्रहण सेट जसलाई व्यक्तिगतता पछि गठन गरिएको छ।
म एक्लै छु!
व्यक्तिको व्यक्तित्व मानव जीवनका थुप्रै क्षेत्रमा देखाइएको छ, व्यावसायिक क्रियाकलापको सुरुवात र निकटतम वातावरण संग परिष्करण अन्तर्क्रिया। यो व्यक्तिगत व्यक्तित्वको "ईंटहरू" को लागि धन्यबाद छ कि हामी प्रत्येकलाई बिलियन्सको फरक फरक छ र हामी सुरक्षित रूपमा मान्न सक्छौं कि मानव जातिको सम्पूर्ण विकास र तदनुसार, सभ्यताको विकास मात्र भयो किनभने व्यक्तिगत व्यक्तिको साथ प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रकृति, आफ्नो गुणमा समाजको व्यक्तिगत सदस्यलाई सक्षम बनाइन्छ। एकअर्कालाई पूरै गर्न, यसैले एकै सम्पूर्ण श्रृंखलामा सबै लिङ्कहरू जोड्दै।
मानिस, एक व्यक्ति र व्यक्तित्वको रूपमा जन्म को क्षण देखि लगातार विकसित हुँदैछ। यस विकास बिना, समाजको जटिल संगठन मात्र व्यावहारिक हुनेछैन। प्रायजसो व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षणहरू संकटको अवस्थामा प्रकट हुन्छन्। चाँडै सही निर्णय गर्न क्षमता र तिनीहरूको कार्यको लागि जिम्मेवारी लिनुहोस् र अरूका कार्यहरूका लागि - यो सबै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत लक्षणको सूचक हो, र यी लक्षणहरूले सामाजिक समूहको आँखामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै मूल्यांकन गर्न सक्दछन् जुन उनीसँग छ। र यस मूल्याङ्कनबाट, व्यक्तित्वको बढ्दो विकासको रूपमा ठूलो मात्रामा निर्भर हुन्छ। अन्य मानिसहरूको आँखामा हेर्दै र उनीहरूको प्रतिबिम्ब देखेर हामी केही निष्कर्ष निकाल्छौं, जसको आधारमा हामी निर्णय गर्नेछौं। यो हाम्रो वरपर अरु अरुको मनोवृत्ति हो कि सबै मनोविज्ञानले ठूलो मात्रामा निर्भर गर्दछ व्यक्तित्व को व्यक्तित्व। हामी खेलको नियमहरू अनुकूल गर्न प्रयास गर्दैछौं, समाजमा स्वीकृत र अझै पनि यो दिनमा छैन। उज्ज्वल व्यक्तित्व लगभग आफ्नो गतिविधिको सबै क्षेत्रहरूमा एक व्यक्ति सफलताको गारंटी दिन्छ, जुन एक स्पष्ट उदाहरण र समाजको अन्य सदस्यहरूको लागि उत्तेजना हो।
मनोविज्ञान मा व्यक्तित्व र व्यक्तित्व पर्याप्त रूप देखि धुंधला चेहरेहरु छ र अक्सर उनि एक सजिलै संग एक अर्को मा प्रवाह गर्दछ। मानिस एक सामाजिक हुदैछ र समाजमा बिना केहि केहि विशेषताहरु बनाउन असम्भव छ। त्यसोभए, त्यही पदकको यी दुई पक्षहरूसँग काम गर्दा, मनोवैज्ञानिकहरूले सामान्यतया सबै उद्देश्य र विषयक कारकहरू खातामा राख्छन् जसले रोगीको व्यवहार प्रतिक्रियाहरूमा प्रभाव पार्छ, साथै सामाजिक वातावरण र तत्काल वातावरणसँग सम्बन्धित सम्बन्धसँग सम्बन्धित समस्याहरू।
विजय कसरी सिक्न सकिन्छ?
सिमोरन - एक झण्डा मा लाल जाँघिया
आलोचना के हो?
नैतिकता र नैतिकताहरू
केटी कसरी सेनामा पुग्छ?
पुस्तकहरू पढ्न कसरी आफूलाई बलियो बनाउँछ?
विलम्ब के हो?
आफूलाई कसरी विश्वास राख्नुहुन्छ र आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ?
कसरी बलियो हुन सकिन्छ?
स्क्रीनशट के हो र कसरी गर्ने?
मित्रलाई कसरी माफी माग्ने?
एक मेमो के हो र यो किन आवश्यक छ?
दाहिने आँखाको कपाल
बैंगनी कोट - के के राख्ने र कसरी स्टाइलिश छवि सिर्जना गर्ने?
भित्री शैलीको कोठा - डिजाइनको रहस्य
महिला शराबता - लक्षण
सागर-बाख्रो तेल - औषधीय गुण
किन सफल महिलाहरु मात्र एक्लै हुन्छन्?
केट मिडलटन र शाही परिवारका अन्य सदस्यहरू रानी एलिजाबेथ द्वितीयको जन्मदिनको सम्मानमा परे परे
थिएटरमा कसरी ड्रेस गर्ने?
दुलहीको लागि उत्कृष्ट स्टाइल - स्क्वायर मा वेडिंग हेयरस्टाइल
उबले चिकन संग सलाद
जाडोमा प्याज भण्डारण कसरी गर्ने?
3 दिनमा सेन्ट पिटरबर्गमा के हेर्नुहुन्छ?
माछा पानीबाट बाहिर निस्क्यो - एउटा चिन्ह
कुटी बिना पनीर पनीर कोसेरोल
Ciara र रसेल विल्सनले उनीहरूको सगाईको घोषणा गरे
खरगोशबाट शिश केब्याब